नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्यक्षमा डा.गेहनाथ बराल नियुक्त #HealthResearch • Health News Nepal
काठमाडौं, १७ चैत्र २०७७
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को अध्यक्ष पदमा प्राडा. गेहनाथ बराल नियुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको सिफारिसमा गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राडा. बराललाई परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राडा. बराल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट सेवा निबृत्त प्राध्यापक हुन् । उनी जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको प्रधान सम्पादक समेत बनेका थिए ।
यस्तै, बैठकले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्ष पदमा डा. गौरब ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत ढकाल बरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन हुन् । उनी यसअघि एनएचआरसीकै इथिकल रिभ्यु बोर्डका सदस्य समेत थिए । यस्तै रिक्त सदस्य पदमा वीर अस्पतालका डेन्टल सर्जन डा. बन्दना खनाल, बुटवलका रेडियोलोजिष्ट अवधेश तिवारी, डा.सन्तोष शाक्य इन्डोक्राइनोलोजिष्ट, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरका डा. रामआधार यादव रहेका छन् । एक जना सदस्य पद भने रिक्त राखिएको छ ।
यस अघिका काउन्सिल अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यहरुको गत १७ फागुनमा चार बर्षे कार्यकाल सकिएको थियो ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Nepal Health Research CouncilPro.Dr. gehanath Baral
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब ७७ ओटै जिल्लामा #Healthinsurence
ललितपुरको नख्खुमा बर्ड फ्लू भेटियो #Birdflu
नेपालमा अहिलेसम्म १० जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण #Covid19
नेपाल फिजियोथेरापी संघले कोभिड भएका विरामीको लागि उपचारको निर्देशिका तयार